Buugaag lagu taliyay oo ka yimid qoraayaal fara badan
Buugaagta ugu fiican ee qorayaal badan.
Hwang Sok Yong's 3-da Buug ee ugu sarreeya
Suugaantu waxa ay marag u tahay taariikhda dhexda ugu casiir badan dhammaan horumarada taariikheed ee lagu asteeyay wareegyada-siyaasadeed ee maalintaas. Kuuriyada maanta waxay ka badbaaday laba u kala qaybsanaansho shaqo iyo nimco dagaal qabow oo Jarmalku awooday inuu ka baxsado 89 laakiin kaas oo ilaalinaya daahyada gaarka ah ...
3-da buug ee ugu fiican Santiago Díaz
Jiilkeygii 70 -meeyadii ayaa durba si fiican ugu kaydsan Santiago Díaz. Sababtoo ah waxaan ku darnaa sheekooyin kale oo waaweyn sida Juan Gómez Jurado, Mikel Santiago, César Pérez Gellida iyo Paul Pen. Dhammaantood waa qoraayaal shakiga ugu sarreeya. Thrillers sida baabuurta waaweyn. Oo si aad ugu raaxaysato iyaga ...
Buugaagta ugu fiican ee Laetitia Colombani
Ma taqaan markaad go'aansato "kani wuxuu noqonayaa heesta aan jeclahay"? Waa hagaag, wax sidan oo kale ah ayaa dhacaya markaad dhammaysato buugga Laetitia Colombani. Markaa waqtigu wuu dhaafayaa oo buugaag cusub ayaa kaa yaabin doona, maadaama heesaha cusub ay noqonayaan dhawaaqa nolosha. Laakiin su'aashu waxay tahay sidee akhriska ama xisaabinta ...
3-da buug ee ugu fiican ee Eva Baltasar
Wareejinta gabayada ee tiraabta waxay ka tagtaa Eva Baltasar raad sida goosashada guga. Raad ay ka buuxaan caraf guuxa leh oo beero iyo carro isugu jira. Gabayaaga jiritaan ee iyada oo kale ah, nuxurku wuxuu lahaan lahaa wax badan oo la xidhiidha goosashada oo weliba xididdada rujinaysa. Xididdada noqon kara...
3-da Buug ee ugu Sarreysa ee Peter Carey
Suuqa daabacaadda ee aan la saadalin karin ayaa marmar ilooba qorayaasha sida Peter Carey oo u dhashay Australia. Waana wax laga xishoodo sababtoo ah shaqada Carey waxaynu ka helaynaa qoraa kali ah oo ku kala duwan sheekooyinka taariikhiga ah, sheeko-xariirad, tacabur iyo siro inoogu soo aroora iyagoo huwan qurxinta casriga ah. Sababtoo ah Carey wuxuu sameeyaa ...
3-da buug ee ugu wanaagsan waxaa qortay Esther García Llovet
Satire waxa uu noqon karaa qaabka ugu aashitada badan. Aragti lisergic ah oo kicisa maaweelo ka dul wareegaysa masiibada akhlaaqda beenta ah, ee laalaabka aadanaha. Marka aragtida saliimka ah ay si naxariis darro ah u weerarto bulshada, muuqaalku wuxuu u duulaa hawada, iyo qaababkooda si ay naftooda ugu waaraan ...
3-da buug ee ugu wanaagsan Daniel Saldaña
Dhiiranaanta, sahaminta iyo qaawanaanta nafta ayaa had iyo jeer ka dhigta suugaanta avant-garde. Wax uu Daniel Saldaña ku wacdiyo si fudud qof si buuxda ugu qancay hawshiisa adduunkan. Kaliya qoraaga la qanciyay ayaa ku dambayn kara in uu gaaro habab cusub oo lagu saadaaliyo luqadda...
Buugaagta Alice Feeney ee ugu fiican
Qoraaga Ingiriisida Alice Feeney oo loo baabtiisay qoraaga weyn ee falanqeeye nafsiga ah, ayaa ku guulaysatay oggolaanshaha akhristayaasha shakiga leh ee adduunka oo dhan. Ilaa heer la barbar dhigo iyada Shari Lapena. Markaas waxay u kala dabqaadi kartaa si weyn ama ka yar sidii ku dhacday kiiska Paula Hawkins. Laakiin…
Bogga1 Bogga2 ... Bogga161 Xiga →